Fihaonana maneran-tany miaraka amin'ny Papa - Ny Diabe Eran-tany
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Fivoriana eran-tany miaraka amin'ny Papa
18 / 09 / 2019 18 / 09 / 2019 ny Antonio Gancedo
Ny delegasiona an'ny 2 World March dia nihaona tamin'i Pope Francis tao Vatican
Tamin'ity alarobia ity dia 18 tamin'ny volana septambra ny 2019, ny 2 World March ho an'ny Fandriampahalemana sy ny Nonviolence dia nihaona tamin'i Papa Francis.
Ny ekipa mampiroborobo ny 2ª Martsa Manerantany, efa niomana ho amin'ny fidirana amin'ny Papal Audience amin'ny alarobia, ampahafantarina, amin'ny feon'ny solontenany, Rafael de la Rubia, ho an'ny Papa Francis momba ny tanjon'ny 2 World martsa ary ny fikasana hitondrana hafatra momba ny fandriampahalemana sy tsy fahatomombanana ao Ny fitsidihanao manodidina ny planeta.
Ny volana martsa faha-2 ao Vatikana
Ny boky misy ny 1 World March, ny 1 Central March ary ny 1 South March ary koa ny sainam-peo mifanandrify amin'ireny diabe ireny dia nomena an'i Pope Francis ho fanomezana.
Taorian'ny fanazavana fohy momba an'i Rafael de la Rubia, dia nampita ny faniriany tsara indrindra taminy i Papa Francis, tamin'ny 2 World martsa sy ireo rehetra nandray anjara tamin'ireny asa fanavakavahana teto an-tany ireny.
Naneho ny faniriany ihany koa ny fampidirana haingana ny herin'ny fifanarahana momba ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary, izay efa nankatoavin'ny Vatikana.
Farany, notahin'i Papa Francis ny sainam-pirenena izay hotanterahina amin'ity mararin'ny 2 World ity ary nohazavaina fa "tokony hampiroboroboana ireo hetsika ireo. Zavatra tsara no tokony hatao ary manaja izany. ”
Faly izahay fa ny solontena ambony indrindra amin'ny finoana katolika dia manondro ny fanohanany ny hetsika toy ny 2 World March ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fahatsiarovana.
Manantena izahay fa ity soso-kevitra ity izay natolotry ny olombelona rehetra, dia hanampy ny olona rehetra, na inona na inona fivavahany, firazanany, firaisana ara-nofo, sata ara-tsosialy ... Satria ny fandriampahalemana sy ny tsy fahatomombanana dia ilaina amin'ny fampandrosoana manokana sy ara-tsosialy ny olombelona rehetra .
Misaotra ny fiaraha-miasa tamin'ny fanarahan-dia ny hetsika ho an'ny Press Press International Press Agency, tamin'ny fandraisan'izy ireo: Diabe ho an'izao tontolo izao ho an'ny fandriam-pahalemana sy tsy fahatoniana ao Vatican
Fanolorana ny martsa amin'ny "Cidade Vella"